Waaqiciga Waayeelka ah ee Raga Toy 158cm Naas Weyn TPE Love Doll Bonnie
Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,Naasaha waaweyn caruusadaha galmada,E koob caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada caato ah,Doollar Jecel
Liiska xiritaanka Birrell:
Dhererka ： 58 inji (148cm)
Miisaan ： 75 lbs (34kg)
UstDayaanna ： 34 inji (87cm)
Dhexda ： 22 inji (55cm)
Miskaha ： 30 inji (77cm)
Futada ： 6 inji (15cm)
Afka: 6.1 inji (15.5cm)
Dhererka gacanta: 15.4 inji （39cm）
Dhererka cagaha: 9.1 inji （23cm）
Elvira - Alaabada Dadka Waaweyn Dhererka nus-Torso Toy Toy Toy -
Ballanqaadkayaga: Urdolls waxay ku siineysaa caruusado jinsi oo tayo sare leh oo laga soo xulay soo saaraha sharafta leh ee Irontech Doll. Dhammaan hal-abuurka 'Irontech Doll' waxay ku saleysan yihiin raadinta dadka ee quruxda! Nidaamka hal-abuurka ah, isku day inaad soo celiso faahfaahin kasta oo ka mid ah quruxda dhabta ah. Hadafkan, guulaha laga gaadhay qalfoofka o ...
Windsor - Gabdhaha Cowboy Indhaha Madoow ee Qurxinta Qurxinta Half-Dheer TP ...
Rosalind - Bushimaha Muhiimka ah ee Dhiigga leh White Long Curly Hair Timite Girl Eas ...
Selina - Gabdhaha Caweyska bushimaha Madoow Tartanka xiisaha Raadinta F ...
Ballanqaadkeenna: Urdolls waxay ku siineysaa caruusado jinsi oo tayo sare leh oo ay sameeyeen soo saare xirfadle ah WM Doll. Waxyaabaha loo yaqaan 'WM Doll TPE' waa mid bey'adeed u fiican, oo aan sun lahayn oo aan waxyeello u lahayn jirka aadanaha; oo ay weheliso habsocodkeeda wax soo saarka horumarsan iyo midka gaarka ah, maqaarka dusha sare ee cuncunka galmada ...
Michelle - 171CM Naaso Waaweyn WM Dolls Madaxa Bushimaha bushimaha Latino ...